Dagaal yahnada Al-Shabaab Yaa U Fudideeyay Weerarkii Saldhiga Lamu - Awdinle Online
Dagaal yahnada Al-Shabaab Yaa U Fudideeyay Weerarkii Saldhiga Lamu
January 18, 2020 (Awdinle Online) –Taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa sheegay in dad ku sugan gudaha dalka Kenya ay fududeeyeen weerarkii Al-shabaab ay ku qaadeen Saldhig Ciidamada Badda ee Mareykanka iyo kuwa Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Manda Bay ee Gobolka Lamu ee Kenya.
Hawlgalkii Qorsheysnaa ee ay Dagaalamayaasha ka tirsan Alshabaab bishan 5-dii ku qaadeen Saldhigga Manda Bay ee Gobalka Laamu ee dalka Kenya waxaa lagu dilay 3 Askar Maraykan ah, laguna dhaawacay 2 kale.
Dhinaca kale, Afhayeenka AFRICOM, Kolonel Kiris Karnes waxa uu sheegay inay Alshabaab doonayaan inay xumeeyaan xiriirka Maraykanka iyo dalalka Afrikaanka.
Afhayeenka AFRICOM oo la hadlayay Wargeyska Millitary Times ayaa waxaa uu tilmaamay AFRICOM sanadkii hore qaaday 63 Weeraro dhanka Cirka oo ay la beegsadeen goobaha ay Alshabaab ku xooggan yihiin.
Si kastaba Al-shabaab ayaa sheegtay in weerarka Saldhiga Lamu ay ku dishay 17 askari Mareykanka iyo 9 katirsan melleteriga Kenya, tirada diyaaradaha lagu burburiyay weerarka ayay Al-Shabaab ku sheegtay 7 diyaaradood iyo in kabadan 5 gaari oo kuwa melleteriga ah.
Previous articleShir u dhaxeeya Jubbaland iyo Puntland oo ka furmay Boosaaso
Next articleTodobo dal oo Afrika ka mid ah Oo Ka Shiraya Khatarta Daawoyinka Been Abuurka Ah.